Eyona DIY ilungileyo kwizilwanyana zasekhaya- Ikkaro
yokuqalisa >> Mascotas
Ukuba ungumntu osebenza ngesandla kwaye uyathanda DIY okanye uyathanda ukwenza izinto ngezandla zakho Kwaye ujonge ukwakha izixhobo ezizezakho. Sikushiya uluhlu lwe-DIY onokuthi wenze izinto ezintle kunye nexabiso eliphantsi kwizilwanyana zakho, nokuba ziintaka, izinja, iikati, iintlanzi, iinkukhu okanye nasiphi na isilwanyana.
Sijonga iiprojekthi ezininzi ezinje ngokuhambisa ukutya kunokusetyenziselwa iikati, izinja, iinkukhu, njl. Indalo kunye neendibano kunye nee-aquariums kunye neendawo zazo, njl.
Kwaye kukho into enomdla kakhulu, ayisiyokudala kuphela kodwa kunye nokuguqula kunye nokuqhekeza izinto esele sinokubanika ubomi besibini okanye ukuzenza zibe luncedo ngakumbi kwaye zilungelelanise iimfuno zezilwanyana zethu zasekhaya.
Ixesha ledinga elingagqibekanga kwihlabathi le-DIY, Ngezixhobo zakhe namaqhinga kwinkonzo yezilwanyana zasekhaya. Sisoloko sizama ukuba siphinde sisebenzise izinto zemihla ngemihla. Jonga into esinayo.
Ngokukhawuleza ukuba icandelo lithathe ivolumu, siya kumakisha kwaye sihlele iitutorials ngezinja (inja, ikati, iintaka, iintlanzi, iinkukhu) kunye nohlobo (feeders, iithoyi, njl.) Ukuba ufumana ukwahlulwa ngobunzima okanye enye Isihluzi sinomdla, ndixelele kwaye ndiyakuxabisa.
Uyenza njani ivili lehamster ngaphandle kwehard drive
Apha sinenye indlela yokwenza thatha ithuba kwi-hard drive endala, ukwenza naye ivili le hamsters. Uluvo lwalevili "lobuchwephesha" lehamster kukuyenza ithi cwaka kangangoko ukuze ingxolo yehamster ebaleka ngaphakathi ingasiphazamisi.
Ukuba ufuna thenga iivili zehamster ezithuleyo kwivenkile yakho yezilwanyana zasekhaya Uya kuqaphela ukuba zibiza kakhulu. Ngale nto yokuqhekeza, uya kufumana i-hamster yakho ukuba ibaleke ngesantya sokukhanya ngaphandle kokwenza ingxolo.
Siza kufuna idiski enzima, ekufuneka sikhuphe kuyo ishafu shaft.
Abondli beentaka abasekhaya
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sishicilele inqaku malunga indlela yokwenza ukutya kweentaka ekhaya.
Namhlanje siza nezinye iimodeli zokuba ufumane izimvo ...
Uyenza njani into yokondla intaka yasekhaya
Intwasahlobo ilapha kwaye amasimi, izitiya kunye nezixeko zizele ziintaka eziqala ixesha lokuzala.
Ukuba unesitiya, okanye indawo apho iintaka zifika khona, sinokwenza le feeder enexabiso eliphantsi kunye neepleyiti zeIkea.
Umahluko phakathi kwale feeder kunye nezinye esinokuzenza nezinye izinto kukuba inobuhle obuncinci kunobo benziwe ngeebhotile zeplastiki.
Izinto esizifunayo zimelwe kulo mfanekiso ulandelayo, zimbalwa kakhulu kwaye zitshiphu kakhulu.
Uyenza kanjani into eyenziweyo i-CO2 yejenereyitha yeelwandle
Kubo bonke abo banazo okanye abacinga ukuseta i-aquarium, ndiqinisekile ukuba olu lwazi luya kuba luncedo ;-)
Ku malunga Uyenza kanjani into eyenziweyo i-CO2 yejenereyitha yeelwandle.
Umvelisi we-CO2 usetyenziselwa ukukhawulezisa i-photosynthesis yezityalo, ukuyenza ikhule kwaye ivelise ngokukhawuleza, kwaye kwangaxeshanye isetyenziswa njengesinciphisi se-PH.
Kwisizukulwana se-CO2 uqobo, siswekile kuphela, igwele lendalo (igwele lasebukhosini alikhuthazwa kuba linamachiza athile) kunye namanzi afakiweyo.
Inkxaso yenziwa ngeebhotile zeCoca-Cola.